Momba anay - Dongguan Weldo machining machining Co., Ltd.
Dongguan Weldo fametrahana mazava machining Co., Ltd. dia mpanamboatra voamarina tamin'ny ISO 9001, natsangana tamin'ny 2008. Hatramin'ny nananganana azy, 13 taona izay, nifikitra tamin'ny finoan'ny orinasa hatrany am-piandohan'ny fananganana, teknolojia faran'izay tsara, mpanjifa izahay. voalohany.
Mpamatsy mpanamboatra azo itokisana amin'ity sehatra ity izahay. Izahay dia nametraka laza tsy misy kilema amin'ny fanaraha-maso kalitao, serivisy ho an'ny mpanjifa, fikolokoloana sy fampiasana aorian'ny varotra, ary miaraka amin'ireo fitaovana mandroso indrindra, izay nametraka fototra mafy orina am-bava an'ny mpanjifanay.
Ny tobim-pamokarana dia miorina ao Dongguan, tanàna indostrialy malaza eran-tany. Dongguan dia iray amin'ireo toby famokarana lehibe indrindra eto an-tany miaraka amin'ny tanjaka famokarana matanjaka sy ny rafitra indostrialy feno. Ny orinasanay dia manana zavamaniry mihoatra ny 6000 metatra toradroa, manampahaizana manokana amin'ny serivisy fanodinana CNC ary OEM, ODM.
Ny fitaovana fanodinana dia ahitana ivon-toerana milina CNC miendrika marimaritra iraisana, lathes CNC, lathes, milina fanaovana fikosoham-bary, milina fanaovana fikosoham-bary, fanapahana tariby, sns.
Ny mpanjifanay dia any Asia, Amerika Avaratra ary Eoropa. Izahay dia manolo-tena amin'ny famokarana sy famatsiana ny milina famokarana cnc kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny fitsaboana, semiconductor, milina ary indostria hafa.
Manana ekipa manana talenta mitarika izay mahafehy ny fahalalana matihanina momba ny milina sy ny zavamaneno marina isika, ary mitarika ny mpiasa teknika hahafehy ny fahaiza-manao fampiharana ary hitantana ny orinasa ara-tsiansa, izay eo am-pandrosoana tsara.
Manana ekipa injeniera matihanina sy mpiasa teknika za-draharaha izahay, nangataka mpiasa teknika foana izahay mba hanana fitaovana fanodinana avo ary hampiasa teknolojia henjana sy sarotra mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Miaraka amin'ny herinay sy ny hafanam-ponay rehetra, mifantoka amin'ny fanomezana ny mpanjifa vokatra avo lenta sy avo lenta izahay ary tonga mpiara-miasa matoky anao indrindra. Miandrandra ny consultation-nao.
Miaraka amin'ny rafitra kalitao tsara azo antoka, fijoroana lehibe ary fanohanan'ny mpanjifa tonga lafatra, ny andian-vokatra sy ny vahaolana novokarin'ny fikambananay dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra vitsivitsy Manaraka ny fitsipiky ny fandraharahana tombontsoa iraisana, nahazo laza tsara teo amin'ny mpanjifanay izahay satria ny serivisy tonga lafatra, ny vokatra avo lenta ary ny vidin'ny fifaninanana. Izahay dia mandray tsara ny mpanjifa avy any ivelany sy any ivelany mba hiara-hiasa aminay hahita fahombiazana iraisana.
Manantena izahay fa afaka manangana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa rehetra, ary manantena fa afaka manatsara ny fifaninanana ary manatratra ny toe-javatra mandresy miaraka amin'ireo mpanjifa. Raisinay an-tanan-droa ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hifandray aminay na inona na inona tadiavinao! Tongasoa ny mpanjifa rehetra na an-trano na any ivelany hitsidika ny orinasanay. Manantena izahay fa hanana fifandraisana mandresy fandresena miaraka aminareo, ary hamorona rahampitso tsaratsara kokoa.